Malmö: Caruurta aan sharciga la hayn oo cayr la siinayo | Somaliska
Kamuunka Malmö ayaa bilaabaya in uu siiyo lacagta cayrta caruurta iyo waalidiinta aan sharciga lahayn ee ku nool kamuunkaasi. Sharcigaan cusub oo magaalada Malmö ka dhaqan galaya sanadka cusub ayaa ah mid u gooni ah magaaladaasi.
Sida caadiga ah qofka wadanka aan sharciga ku lahayn xaq uma leh taageerada caryta balse kamuunka Malmö ayaa go’aamiyay in caruurta la socota waalidiinta aan sharciga lahayn la siiyo lacagta cayrta isla markaana laga bixiyo kirada guriga. Kamuunka Malmö ayaa go’aankaan ku saleeyay in ay dhaqan galinayaan waxa loo yaqaan Barnkonventionen oo ah sharciga quseeya xuquuqda caruurta ee Qaramada Midoobay.
Sharcigaan qaaska ah ee uu qaatay kamuunka Malmö ayaysan jirin kamuun kale oo la qaba. Qofka wadanka sharciga looga diiday ayaa hada caruurtiisa loo ogolyahay in ay waxbartaan iyo in ay daryeel caafimaad helaan balse wax taageero lacag ah ayaan horay u jirin marka laga reebo gunada yar ee la siiyo qofka inta uu sharciga sugayo.
Ururada u dooda xuquuqda soo galootiga ayaa soo dhaweeyay go’aanka Malmö. Waxaa la filayaa in ay kamuunada kale ku dayan doonaan talaabada wanaagsan ee ay qaaday Malmö.
asc walaal kamuunka malmo kaliya miya qofkii adarees ku taago maku jira dadka certa la sinayo